Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo gaaray Addis Ababa kulana muhiim ahna la qaatay beesha caalamka
Addis Ababa Axad 20 May 2012 SMC
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray Addis Ababa, halkaas oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa isla maanta kulamo muhiim ah la qaatay Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Yurub Mr Alexander Rhondos, Ergeyga Gaarka ah ee Mareykanka Ambassador James Swan, Ku Xigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM Mr Peter De Clercq iyo mas'uuliyiin kale.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa u tagey Addis Ababa si uu uga qeyb galo kulanka ay yeelanayaan Saxiixayaasha Roadmap-ka oo beesha caalamkuna ay goob joogayaal ka ahaan doonaan kulankaas. Kulankan ayaa la filayaa in Madaxda Soomaalida ay go'aanno muhiim ah ku gaaraan oo ku wajahan sidii loo dhameystiri lahaa Xilliga Kala Guurka ah. Bacdamaa lagu jiro dhameystirkii Xilliga Kala Guurka ah ayaa la filayaa in dhowaan Ergeda Ansixinta Dastuurka ay ku kulmaan Muqdisho si ay uga doodaan Qabyo Qoraalka Dastuurka oo ay u ansixiyaan si KMG ah inta laga qabanayo Afti Dadweyne, iyo in Madax Dhaqameedka ay soo xulaan xubnihii Baarlamaanka cusub si August loo helo Dastuurk KMG ah oo Dowladda Rasmiga oo taamka ah ay ku dhaqanto, Baarlamaan tayo leh oo dalka ka saari kara marxaladdan adag iyo Dowlad Rasmi ah oo tayo leh.
Ra'iisul Wasaare Abdiweli ayaa u sheegay mas'uuliyiintii uu la kulmay sida ay uga go'antahay in la soo af-jaro Xilliga Kala Guurka ah oo la helo baarlamaan kooban oo tayo leh iyo dowlad Rasmi ah oo shacabka u istaaga, kalsooni fiicanna ka heysta shacabka.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali ayaa lagu wadaa inuu kulamo gooni gooni ah la qaato Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Melez Zenawi iyo mas'uuliyiin kale ee ka tirsan beesha caalamka gaar ahaa mas'uuliyiin ka tirsan Dowladda UK oo haatan ku sugan Addis Ababa iyo Safiirka UK ee Soomaaliya.